Dachshund puppies. Zvaunofanira kuziva pamusoro muridzi wavo ramangwana?
Home uye Family, Pets
Iwe vokutanga vakasarudza kuva puppy. Ngatimboonai zvimwe pfungwa kuti unofanira kuziva. Pasina mubvunzo, puppies ose akanaka uye fadza dachshunds. Vane rudo uye vakasvinuka, tamba uye anosetsa zvikuru. Asi havana - kwete matoyi, asi zvisikwa zvipenyu. Uye uri kuunza puppy mumba, tora basa upenyu hwake, utano uye Marererwo zvakakodzera.
Ngatimbotaura pamusoro zvinhu erudzi urwu. Zvino imbwa idzi kashoma kushandiswa chinangwa chavo inozoshandisirwa - nokuti Norn kundovhima. Zvisinei, dzimwe zvinoitwa nembwa Norn, rudzi anoramba. Low kukura uye musana tatamuka makakombama makumbo uye simba tsandanyama, meno simba, akashinga, richizvitenda hasha, chido kudzora zvinogona kukonzera mamiriro ezvinhu zviri ngozi imbwa.
Nokuda kwayo anatomical zvinhu Dachshund puppies vari kusangana yakawedzerwa mutoro pamusoro nomuzongoza. Kutora ichi nhoroondo, vanofanira kuchengetedzwa kubva zvakare unopinza akasvetuka kana akasvetuka kubva kumusoro. Dzimwe nguva kunyange kusvetuka akaipa kure kwomubhedha anogona kukuvadza puppy. Nechikonzero chimwe chete varege kuzomboona uchasimudzirwa kubudikidza scruff kwemitsipa. Simudza mwana wako namaoko maviri chete, kutsigira pasi chityu uye pasi nedumbu. Kana puppy inokura uye achaita kutamba muchivanze nevamwe nembwa, edza kunonga shamwari dzake, kunyanya mukuru paurefu hwake uye simba, vanorichengeta kurwisa imbwa huru.
Kana tinogona kusimudza mbwanana, achitora netsoka dzakapfava ake mberi. Izvi zvingaita kuti chokwadi chokuti emaoko avo achanamatira kumativi. Nokuda kwechikonzero ichi, puppies mari kusvikira gore haafaniri kuenda pasi masitepisi. Musarega dzinovaraidza wako kumira nemakumbo ayo hadzi. Izvi zvingaita kuti kugozha, tisingatauri imwe mutoro pamusoro nomuzongoza.
Maererano rudzi mureza, Dachshund nzeve nechepasi anofanira kumutswa zvishoma. Saka havasi yakarembera kufanana mamvemve, havafaniri kuedza kutsakatisa.
It anoenda pasina achiti kuti zvokudya puppy mari yechikoro inofanira kuva wakakwana. Up 2 mwedzi mukaka zvavanoda, saka hapana chikonzero kutenga kana mwedzi nehafu mwedzi yekare puppy. The-mwedzi miviri puppy ane kazhinji vakazvimiririra akadya kubva mbiya. Fudza zvinofanira kuva zvakafanana maawa. Kusvikira 4 months unofanira 5 feedings, ipapo nhamba zvishoma nezvishoma wakaderedzwa kusvika 4-3 pazuva. Adult imbwa zvikuru kaviri-zvokudya.
The puppies vanofanira kudya mari mushure Vabvisa kubva mai vake? Zvinozivikanwa kuti imbwa zvikara uye zvakanakisisa ayo physiology dzakashandisa nyama zvokudya. Chimwe chinhu ndechokuti kwenguva hondo kunogona kudhura. Naizvozvo puppies kazhinji zvokudya zviyo, iva nechokwadi kuti kuwedzera kuti nyama zvigadzirwa. 2 mwedzi yekare puppy Porridge nani kupa semolina ezviyo "Hercules" kana Buckwheat-kutedzemuka. Kusvikira 4 months pazera, zvakafanira kuti kubika navo mukaka. Pashure 4 months - pachikafu muto.
Meat wokutanga kunofanira kupiwa muchimiro nyama. Kana wava nechokwadi chokuti hapana ane chisvetasimba mazai (nyama yakatengwa pachitoro, anomhanya chakakodzera utsanana rokuongorora), anogona kupiwa mbishi. Mafuta yenguruve utongi. Unogona Ipai minced hove zvomumvura. Kaviri pavhiki Porridge kuwedzera imwe mbishi zai. Cheese, dheri zvigadzirwa, chizi dachshunds kudya nokuzvidira. Kana puppy anokurira zvokudya nayo zvechokwadi akawedzera kune mbishi pfupa.
Sweets, nyama, soseji, imbwa inopisa, zvihwitsi, shuga, siyana zvinonaka mari havafaniri kugamuchira. Kana uchida kuchengetedza imbwa kubva kuratidzwa diathesis uye kufutisa, nani zvokudya nayo nyore uye zvokudya zvakanaka. Kunyange vachidzidzisa mari kuita pasina zvihwitsi uye Sausages. Somunhu chinokurudzira kuva vakanaka zvidimbu zvokudya yakaoma kana chizi.
Usakanganwa kuti imbwa vanofanira nguva dzose kuva mvura yokunwa. Kuwedzera mavhitaminzi zvokudya uye kugadzirira ane calcium mamwe chiya chisingadiwi zvinhu, kuchekwachekwa miriwo.
Usakanganwa pamusoro nenguva majekiseni.
With zvakanaka, zvokudya uye nenguva kubaya pamusoro puppy vachakura utano uye vakasimba. Rambai ichi mupfungwa uye hamungazofadzi kuzvidemba zvauchasarudza kuti imbwa.
Ferrets sezvo dzinovaraidza: zvayakanakira nezvayakaipira, zvinhu yevasungwa uye nokungwarira
Dog vanhurume kazhinji: Zvinokonzera neMarapirwo
Chii zvokudya nehuku zvakanaka
Apo dzimba akazviratidza Mohnatoe Miracle: mazano ari kutarisira Puppy
Angelfish akwariyamu hove - ruminant mumba
Mizinga nokuti katsi: sei chisarudzo chakarurama
Chii chinonzi rokunyika vanhu? Concept uye tsananguro (inobva yokufungidzira "Hondo uye Rugare")
Achipukuta muchina: mhando nemamiriro
Vangani makiromita kubva Moscow kuna Yaroslavl uye apo kumisa munzira
Memory vanokwanisa 1 GB - ndiwo sei?
Raina Beach Hotel 4 *, Turkey: mapikicha, mitengo uye wongororo
Ipod - chii icho? Kuzivisa mutsara wemashonga
Kana yemakambani Style sangano kuchikosha?
Drug "Bitsillin-5": mirayiridzo kushandiswa
Chitsuwa Samosi photos zvinokwezva uye wongororo Greek
Smart Sequential Shooting Nerumwe Photography Tips, Part Two
Drug "Molsidomine": mirayiridzo kushandiswa, mutengo, analogs
The mushonga 'Citovir': mirayiridzo kushandiswa